Namoota Afrikaa keessaa bara 2018 keessa seenaa hin dagatamne hojjetan - BBC News Afaan Oromoo
Namoota Afrikaa keessaa bara 2018 keessa seenaa hin dagatamne hojjetan
Madda suuraa, Walta TV
Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad loltoota isa sodaachisuuf dhufan puushaappii hojjisiisuun deebisan
Xalayaawwan barreessitoota Afriikaatiin barreeffaman keessaa, kan gaazexeessituun Gaanaa Elizabeth Ohene taatewwan gurguddoo bara 2018 irratti barreessite ilaalla.
Barichi kan itti seenaan waan haaraa dalaguu Afriikaa keessatti qabatamaatti mul'ate jedhamuu danda'a.
Ministirri Muummee biyya tokkoo loltoota hoomaan itti dhufan puushaappiidhaan deebisuun taatee yeroo maraa miti.
Keessattuu wayita hoomaan waraanaa hidhatee humnaan mooraa waajjira Ministira Muummee senuun gaaffii kaffaltii mindaan walqabatu gaafatu to'achuunuu rakkisaadha.
Yaalii fonqolcha mootummaa moo gaaffii mindaa?
Biyyoonni pirezedaantii dubartii qaban eenyufaadha?
Pireezidantii haaraa maaliif?
Yeroo baayyee gochi akkanaa dhumni isaa fonqolcha mootummaatiin goolabama.
Garuu Ministirri Muummee kun erga ji'a Waxabajjii keessa gara aangootti dhufee wantoota hin eegamne hedduu dalageera.
Namni umurii waggaa 42, Afriikaa keessatti hoogganaa dargaggeessa ta'e kun waan inni hojjechuuf deemuu fi akkaataa inni itti hojiisaa raawwatu tilmaamuunillee nama dhiba.
Itoophiyaan waggoota hedduuf biyya ollaa kan taate Ertiraa waliin nagaa uumuu dhabuudhaan biyya hooggana abbaa irree jedhamuun qeeqamaa turte.
Garuu Ministirri Muumme kun aangoo qabatee utuu hin turin labsii yeroo muddamaa kaaseera, hidhamtoota siyaasaa kumaatamaan lakkaawaman mana hidhaatii gadi dhiiseera, baqaan kan biyyaa bahan gara biyyattii akka deebi'an godheera, marsariitiiwwanii fi dhaabbilee TV yeroo dheeraaf uggura jala turan irraa kaaseera.
Masaanuu yeroo dheeraa waliin nageenya
Akkuma biyya keessatti jijjiirama ajaayibsiisaa hojjete gama hariiroo dippiloomaasii cimsuutiinillee hojii guddoo hojjeteera.
Waraana yeroo dheeraa Ertiraa waliin ture dhaabsisuun daangaarratti waldhabuun yeroonsaa akka goolabamu taasiseera.
Pirezidaanti Sahleworqi ZAwudee fi Ministira Muummee Abiyyi Ahmad
Onkoloolessa keessa Ministirri Muummee Abiyyi Ahmad kaabinoota isaanii keessaa walakkaa dubartoota muudaniiru.
Dabalees Ambaasaaddar Sahleworqi Zawudee Pirezidaantii biyyattii, Maazaa Ashannaafii Pirzidaantii Mana Murtii Walii GAlaa biyyattii, Burtukaan Miidhaksaa Walitti Qabduu Boordii Filannoo Biyyaalessaa akkasumallee Billanee Aster Siyyum dubbi himtuu mootummaa gochuun muudeera.
Afriikaan Kibbaas biyya jijjiirama ajaayibaa gama hooggansaan agarsiifte keessaati. Ta'us garuu aangoon Siirril Raamaapoosaa abdatamee ture mufiitti geddaramaa dhufeera.
Siiril Raamaapoosaan malaammaltummaa fi rakkoo hoji dhabdummaa furuuf hojii guddaatu isa eeggata
Guraandhala darbe erga Pirezidaantiin biyyattii duraanii kan malaammaltummaadhaan laaqamaniiru jedhamanii aangoorraa buufamanii aangoo kan qabatan Obbo Raamaapoosaan akka Dr. Abiyyi Ahmad puushaappii hojjisiisuu baatanis taphoota xiyyeeffannoo jaallewwan isaanii harkisan hedduu raawwachuudhaan hojiisaanii eegalan.
'Gaaddidduu irra buufate'
Wayita namni kun aangootti dhufan namoonni hiika arganne, barri itti gammadnee jiraannu dhufe jedhanii abadatan.
Xaxaa fi laaqiin malaammaltummaa Pirezidaanti Jaakoob Zuumaan keessa turan garuu gaaddidduu hamaa itti ta'eera.
Namni si'a tokko abdatame, battalumammoo badii hoogganaan duraanii isa dhaalchiseen abdiin irraa ka'uurratti argama.
Biyyoota Afriikaa 54 kan yeroo baayyee tokkummaa dhabuun gadi isaan qabu wanti tokkoomse tokkommoo baruma darbe kana keessa mudateera.
Wayita Pirezidaantiin Ameerkaa Doonaaldi Tiraampi godaantota biyyoota Afriikaarraa garas imalan jibbiinsarraa kan ka'e inumaa ''jarri boolla kosiiti'' ykn afaan Ingiliziitiin 'shitholes' jechuun arrabsan.
Yeroo xiqqoo boodammoo haati warraa Doonaaldi Tiraampi Meelaaniyaan biyyoota Afriikaa afur Gaanaa, Maalaawwii, Masirii fi Keenyaa daawatan.
Wayitumasaan daawwannaarra jiran abbaan manaammoo biyyaa biyyoonni Afriikaa haadha warraa kiyya baayyee jaallatu jechuun tuwiitara irratti barreessu.
Melaaniyaa Tiraampi heelmeetii uffatanii Keenyaatti suuraa ka'an
Wayita arrabsoon Tiraampi godaantota Afriikaa arrabsan ajandaa dubbii addunyaa ta'ee jirutti dargaggeessi Maalii kan biyya Firaansi jiraatu daa'ima gamoorraa kufaa jirtu baraare.
Ergasii namni kun 'Spiderman' jedhame , Pirezidaantiin biyyatti Emmanule Makroonis lammummaa Firaansi kennaniif.
Dhimma Boob Waayin
Dhimmi namoota hedduu boonse akkuma jiru, kan kumaa kitila gaddisiisellee mul'ateera, dhimma dargaggeessa Yugaandaa Boobii Waayin.
Wallisaa beekamaan kun ajaja miseensota paarlaamaa biyyattiitiin poolisaan akka malee reebamee ture, fayyummaansaa rakkoo keessa utuu jiruullee himatamee mana murtiitti dhiyaateera.
Badhaasa kabajaa Weah Wenger'f
Arsene Wenger wayita gara Laayibeeriyaa imalanii turanitti simannaan gootaa taasifameeraaf
Bara 2018 ji'a Amajjii keessa Pirezidaantii Laayibeeriyaa kan ta'an Joorji Weah, namoota tapha kubbaa miillaa isaan jalqabsiisuurraa eegalanii isaan qarqaaran galateeffannaadhaan eegalaniiru.
Boodarrammoo leenjisaa isaa duraanii Arsene Weneger'f badhaasa kabajaa biyyattii guddicha kennaniiruuf.
Neelsan Mandeellaan utuu lubbuudhaan jiraatanii silaa yoona umuriinsaanii waggaa 100 ga'a, guyyaa dhalootasaanii waggaa dhibbaaffaa kabajuuf silaa yoona waan addunyaan taatuu, ajaayiba.
Hugh Masekela, lammiin Afriikaa Kibbaa xurumbaa afuufuu fi hojii farra sirna appaartaayidiitiin beekamuu bara kana gara jalqabaa du'e, gadda guddaatu ta'es.
Haati warraa Neelsan Mandeellaa Wiinii Madikizeelaa Mandeellaa bara kana keessa du'an, geggeessaan taasifameefis addunyaa malaalchiseera.
Qondaalli UN duraanii Kofi Anaan wayita du'aan boqotan Gaanaa , Magaalaa Akraa keessatti geeggeessaan kabajaa taasifameeraaf
Waggaa 80ffaa isaanii kabajatanii ergasiillee hoji nagaa eegsisuu utuma hojjetanii Hagayya darbe Suwiizerlaandi magaalaa Bern keessatti akka tasaa du'an, qondaalli UN duraanii Kofii Anaan.
Reeffisaaniillee erga gara biyya dhalootasaanii galee booda akkaataa aadaa Gaanaatti kabajaan geggeeffameera.
Bara kana jaalalli Chaayinaa fi Afriikaa dabaleera, kora Beejingitti Afriikaa fi Chaayinaa walitti fiderratti Pirezidaantiin Chaayinaa Shii Jiinpiingi maallaqa doolaara Ameerkaa biiliyoona 60 Afriikaaf arjooman.
Warri Ameerkaa garuu Chaayinaan biyyoota Afriikaa goyyoomsuun liqaa hin barbaachisneef saaxilaa jirti jechuun qeeqasaanii diriirsan.
B.Jeneraal Haayiluu Gonfaa: 'Fonqolcha mootummaa tahuu baatus hawwii isaanii agarsiisaniiru'
11 Onkololeessa 2018
Mormii Boobii Waayin: Raayyaan waraanaa Ugaandaa reebicha gaazexeessitootaaf dhiifama gaafate
Marii Ergamaan Addaa US Masriifi Eertiraatti taasisanirraa hanga ammaa maal beekna?
Keeniyaan qalma harree dhorkitee turte deebistee eeyyamte